China Inconel 690 bar / Plate / pipe / ring / fasteners ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Sekonic
Inconel 690 ဘား / ပြား / ပိုက် / လက်စွပ် / စွဲစေ
ဘုံကုန်သွယ်ရေးအမည်များ: Inconel 690, Alloy 690 UNS N06690, W ။ အမှတ် 2,4642
Inconel 690 သည်မြင့်မားသောခရိုမီယမ်၊ နီကယ်အခြေပြုသတ္တုစပ်သည် aqueous media အမျိုးမျိုးနှင့်အပူချိန်မြင့်သောလေထုများမှချေးယူခြင်းကိုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောခွန်အား၊ သတ္တုကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
Inconel 690 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
အလွိုင်း % C Cr Fe Ti အယ်လ် NB + Ta Cu B Mn Si S P Co. , N Zr နီ
690 min ။ 0,015 ၂၇.၀ ၇.၀ - - - - - - - - - - - - ချိန်ခွင်လျှာ
မက်စ် ၀.၀၃ ၃၁.၀ ၁၁.၀ 0.5 0.5 ၀.၁ ၀.၂ 0,005 0.5 0.5 0.01 0,015 ၀.၀၅ ၀.၀၅ ၀.၀၂
Inconel 690 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
Inconel 690 ပုံမှန်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ
Inconel 690 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ဘား / လှံတံ ဝါယာကြိုး ဖြန်း / ကွိုင် စာရွက် / ပြား ပိုက် / Tube အတု
Inconel 690 ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကို Sekonic Metals
Inconel 690 ဘား & လှံတံ
Inconel 690 ဂဟေဝါယာကြိုး
Inconel 690 စာရွက် & ပန်းကန်
Inconel 690 အတု Ring ကို
Inconel 690 ချွတ် & ကွိုင်
Inconel 690 ချောမွေ့ပြွန် & ဂဟေဆော်သောပိုက်
အဘယ်ကြောင့် Inconel 690?
1. များစွာသောတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး aqueous မီဒီယာနှင့် hightemperature လေထုမှ Excellent ကခုခံ။
2.High အစွမ်းသတ္တိ ကောင်းသောသတ္တုရိုင်းတည်ငြိမ်မှုနှင့်အဆင်သင့်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဝိသေသလက္ခဏာများ
oxidizina ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် oxidizina ဓာတ်ငွေ့မှခုခံ 3.outstanding
၄ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ဖြေရှင်းမှုများကိုကလိုရင်းပါ ၀ င်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖိအားပြင်းထန်သောဖိအားပေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Inconel 690 လျှောက်လွှာ：
၎င်းသတ္တုစပ်သည်ဆာလဖာပါဝင်သောဓာတ်ငွေ့များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုယူနစ်များ၊ ဆာလ်ဖာအက်ဆစ်ကိုပြုပြင်ရန်မီးပြင်းဖိုများ၊ ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက်မီးဖိုများ၊ ပြန်လည်သန့်စင်စက်များ၊ အပူချိန်မြင့်သောရေအမျိုးအစားများတွင် alloy 690 သည်နိမ့်သောချေးမှုနှုန်းနှင့်ဖိအား - ချေးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်။ alloy 690 ကိုနျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ရေနွေးငွေ့မီးစက်ပြွန်များ၊ baffles၊ tubesheets နှင့် hardware များအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ Inconel 725 BAR / ROD / Plate / Gasket / Tunging ganger
နောက်တစ်ခု: Inconel 617 ဘား / ဝါယာကြိုး / ပြား / ပိုက် / လက်စွပ်
အလွိုင်း 690 ဘား
Inconel 690 ဘား
690 factroy inconel
Inconel အလွိုင်း 690
Monel K500 ဘား / ဝါယာကြိုး / စာရွက် / လက်စွပ်
Hastelloy G30 (UNS N06030) စာရွက် / ပြား / ဘား
Incoloy800 / 800H / 800HT အနားကွပ်
မြင့်မားသောအပူချိန်နွေ Inconel X-750 နွေ ဦး
Inconel 601 bar / sheet / Plate / seamless tub / B ...